वर्षाको विवाहको फोटो खिच्न मिडियालाई रोक, आखिर किन ! – An Online Entertainment News Portal
HomeNewsKollywoodवर्षाको विवाहको फोटो खिच्न मिडियालाई रोक, आखिर किन !
वर्षाको विवाहको फोटो खिच्न मिडियालाई रोक, आखिर किन !
February 14, 2019 Tulasa Karki Kollywood, News 0
आज फेब्रुअरी १४ अर्थात् भ्यालेन्टाइन डे आज अभिनेत्री वर्षा राउत बैवाहिक बन्धनमा बाधिदै छिन । उनले अभिनेता संजोक कोइरालासँगको लामो प्रेम सम्बन्धलाई आज विवाहमा परिणत गर्न लागेकी हुन् ।
वर्षा आफ्नो परिवार आफन्त तथा निशित व्यक्तिहरुको बीचमा काठमाडौंको एक पार्टी प्यालेसमा हिन्दु धर्म अनुसार विवाह गर्दै छिन ।
सार्वजनिक खबरका अनुसार वर्षाको विवाहमा कुनै पनि मिडियालाई प्रवेश गर्न दिइएको छैन । विवाहको कार्ड सामाजिक संजाल मार्फत शेयर गर्दै विवाहको खबर दिएकी उनको विवाह आज भने कसैलाई फोटो खिच्न पनि दिइएको छैन । यसको खास कारण भने अझै खुलेको छैन ।
वर्षा अभिनित फिल्म केहि समय अगाडी प्रर्दशनमा आएको थियो ।
आज बैवाहिक बन्धनमा बाधिदै वर्षा, हेर्नुहोस इन्गेज्मेन्ट देखि मेहेन्दी सम्मको फोटो फिचर
आयुष्मान र विशालको प्रेममा मग्न प्रियंका